Waftigii federaalka ee ku sugnaa Bossaso oo kulamo la yeeshay ganacsatadii ku hanti-beeshay dabkii suuqa iyo guddigi Puntland u xilsaartay. – Radio Daljir
Diseembar 10, 2011 12:00 b 0
Bossas, Dec 10 ? Wafti ka socday dawladda federaalka KMG ah ee Soomaaliya oo muddo todobaad ah ku sugnaa magaalada Bossaso ee xarunta gobolka Bari ayaa kulamo is-daba-joog ah la yeeshay ganacsatada magaalada Bossaso gaar ahaan kuwii hantidoodu ku gubatay dabkii qabsaday suuqii Bossaso, waxaana sidoo kale ay kulamo la yeesheen guddi dawladda Puntland u xilsaartay khasaarihii ka dhashay gubashada suuqaasi.
Waftigaan uu uu hoggaaminayo wasiir ku-xigeenka wasaaradda hawlaha guud iyo guryeeynta Xareed Xasan Cali, ayaa ujeeddooda socdaal ee imaatinka magaalada Bossaso ku salaysnayd sidii ay qiimayn ugu samayn lahaayeen heerka burbur-dhaqaale oo ka dhashay dabkii baabi?iyey suuqii ganacsiga ee magaalada Bossaso.
Mas?uuliyiin ka tirsan ganacsatada iyo guddigii qiimaynta baaxadda burburkii-hantiyeed ee dabkaasi sababay ayaa Radio Daljir u sheegay in kulamada badankooda diirradda lagu saaray sidii loo xaqiijin lahaa miisaanka dhaqaale ee halkaasi ku bas-beelay, si looga gacan-qabto dadkii ku hanti-beelay.
Dad Radio Daljir wax ka waydiisay arrimhaasi, waxay intaasi ku dareen mas?uuliyiinta dawladdu ee la kulmay in ay ballanqadeen dawlad federal ahaan in ay xaqiiqaha dhab ahaaneed ee la soo aruuriyo in ay u gudbin doonaan dawladda federaalka si ay uga jawaabto wixii kalaankeeda ah oo aaddan u gargaaridda dadkii ku cayrtoobay dabkii suuqa Bossaso.
Imaatinka waftiga dawladda federaalka ayaa ka dambeeyey kaddib markii horay xukuummada federaalka ugu dhawaaqday lagama maarmaanimada in la saacido dadkii ku saboolay holacii-dabeed ee baabi?iyey suuqii Bossaso bilawgii bishaan aynu ku jirno.
Degmada Baardheere oo saaka laga qaxayo, ka dib duqeyn shalay ka dhacday.